FBS - သင့်အတွက်ယုံကြည်အားကိုးဖွယ်ရာ Forex broker
FBS သည်နိုင်ငံပေါင်း 190 ကျော်တွင်အထင်အရှားရှိနေသော နိုင်ငံတကာ broker တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သူ ၁๐ ၀၀၀ ၀၀၀ နှင့်ပူးပေါင်းလက်တွဲဆောင်ရွက်သူ ၃၇၀ ၀၀၀ တို့မှ အကြိုက်ဆုံး Forex ကုမ္ပဏီအဖြစ် FBS ကိုရွေးချယ်ထားကြပါတယ်။
ဖောက်သည်များအတွေ့အကြုံကောင်းများရရှိစေရန် FBS သည် ဆီမီနာများနှင့် အထူးအခမ်းအနားပွဲစဉ်များဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ဖောက်သည်များအား လေ့လာသင်ယူနိုင်ရန် သင်ထောက်ကူများ၊ cutting-edge အရောင်းအဝယ်နည်းပညာများနှင့် Forex ဈေးကွက်အတွင်းမှနောက်ဆုံးရဗျူဟာများ ထောက်ပံ့ပေးနေပါသည်။ အရောင်းအဝယ်သမားအသစ်နှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအနေဖြင့်ဤကဏ္ဍ၏အသုံးဝင်ပုံကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
အခမ်းအနားပွဲစဉ်များကိုလည်း တစ်လျှောက်လုံးစနစ်တကျဖြစ်စေရန်စီစဉ်ခြင်းနှင့်အားလုံးအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ခြင်းများလုပ်ဆောင်ပါသည်။ ခေတ္တအနားပေးချိန်တွင်လည်း ဧည့်သည်တော်များအားစားကောင်းသောက်ဖွယ်များ ကော်ဖီများဖြင့်ဧည့်ခံပါသည်။ အစည်းအဝေးအားလုံးကိုလည်း မိသားစုပုံစံသဘောမျိုးဖြစ်စေပြီး FBS ကုမ္ပဏီ မှအရောင်းအဝယ်သမားများနှင့်ပူပေါင်းလက်တွဲဆောင်ရွက်သူများအားလုံးမည်သူမဆိုပါဝင်ရန်ကြိုဆိုဖိတ်ခေါ်လျက်ရှိပါသည်။ နောက်ပြီးအရေးကြီးဆုံးကတော့ အခမ်းအနားပွဲစဉ်အားလုံးပါဝင်ဆင်နွှဲမှုသည် လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။.
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တုိ့၏ဖောက်သည်အားလုံးကိုတန်ဖိုးထားပြီး ဖောက်သည်တိုင်းတွင်မတူကွဲပြားသောလိုအပ်ချက်များရှိမည်ကိုလည်းသဘာပေါက်နားလည်ထားပါသည်။ အထူးသဖြင့် မူဆလင်လူမျိုးအရောင်းအဝယ်သမားများအတွက် အစ္စလမ်အဆုံးအမနှင့်ဆန့်ကျင်မှုမရှိသော swap-free အကောင့်များ (အစ္စလမ် အကောင့်ဟုလည်းသိထားကြသောအကောင့်များ) ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။
သင့်အနေနဲ့ စိတ်ချယုံကြည်ရသော broker ကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက FBS တွင်အကောင့်ဖွင့်ရန်စဉ်းစားစေချင်ပါသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခု သင့်နောက်မှာရှိနေရင် Forex မှာအရောင်းအဝယ်လုပ်ရာတွင် မည်မျှလွယ်ကူပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိလဲဆိုတာ သင့်အနေနဲ့ အံ့သြစွာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁๐ ၀၀၀ ၀၀၀
၆၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀
ဖောက်သည်များ၏နှစ်စဉ်အမြတ် - ဒေါ်လာ
FBSအနေနှင့် ၂၀၀၉ခုနှစ်ကတည်းက ဖောက်သည်များအတွက် အရည်အသွေးမြင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို ၀န်ဆောင်ပေးလျှက်ရှိပြီး ဈးကွက်ထဲမှာဦးဆောင်နေတဲ့အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ်လည်း အများ၏အသိအမှတ်ပြုမှုကိုလက်ခံရရှိထားပါသည်. FBS သည် အကောင်းဆုံး FX IBအစီအစဉ်ဆု, အင်ဒိုနီးရှား အကောင်းဆုံး ငွေကြေးဈေးကွက် အကျိုးဆောင်ဆု, အရှေ့တောင်အာရှ အကောင်းဆုံး Forex အကျိုးဆောင်ဆုနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အကောင်းဆုံး Forex အကျိုးဆောင်ဆုများကိုရှိခဲ့သည်. ထို့ပြင် ကျေးလက်ရှိ အိမ်များ လမ်းများကိုပြုပြင်ပေးခဲ့သည့်အတွက် အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရမှပေးအပ်သော ဆုများကိုပါရရှိခဲ့သည်. ထို့ပြင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၆ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုရှိတဲ့ ငွေကြေးအကျိုးတော်ဆောင်လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်ဂုဏ်ပြု ညွှန်းဆိုခြင်းခံခဲ့ရပြီး, အကောင်းဆုံးIBအစီအစဉ်ဆု, ၂၀၁၆ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံးဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဆု, ၂၀၁၅ခုနှစ်အတွက် အာရှရဲ့အကောင်းဆုံးForexကုမ္ပဏီဆု, ၂၀၁၅ခုနှစ်အတွက် လုံခြုံအာမခံမှုရှိသည့် အကောင်းဆုံးဖောက်သည်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုဆု, ၂၀၁၅ခုနှစ်အတွက် အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသရဲ့အကောင်းဆုံးအကျိုးတော်ဆောင်ကုမ္ပဏီဆု, အရှေ့အလယ်ပိုင်းရဲ့အကောင်းဆုံး အကျိုးတော်ဆောင်ကုမ္ပဏီဆု နှင့် အခြားဆုတံဆိပ်များကိုရရှိထားသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
ကိန်းဂဏန်းများနှင့်င့် FBS :
နေ့စဉ် FBS အကျိုးတူဆောင်ရွက်သူနှင့်ဖောက်သည်အကောင့် ၈၀၀၀ ဖွင့်နေကြပြီဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်များရဲ့ထက်ဝက်ဟာ ၄င်းတို့၏ကနဦးစရံသွင်းငွေရဲ့ ၈ ဆ ၁၀ ဆခန့်တိုးပွားပြီးဖြစ်သည်။ ၄၈ ရာခိုင်နှုန်းသောဖောက်သည်တွေဟာ FBS ကို ၄င်းတို့၏အဓိကဝင်ငွေလမ်းကြောင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြပါသည်။
စက္ကန့် ၂၀ တိုင်း ဖောက်သည်များဟာ အမြတ်ငွေများကိုထုတ်ယူနေကြပါသည်။ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသောဖောက်သည်တွေဟာ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ထာဝရရှိနေပါသည်။